တောင်ပြုန်းပွဲတော်သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးသည်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန် မန္တလေး-တောင်ပြုန်းလမ်းပိုင်း ရထားခရီးစဉ်ကို ၁၃ခေါက်အထိ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲပေးမည် - Yangon Media Group
တောင် ပြုန်းပွဲတော်သို့ လည်ပတ်ကြမည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှ လာ ရောက်ကြမည့်ခရီးသည်များ ပွဲ တော်သို့သွားလာရေးအဆင်ပြေ စေရေးအတွက် ပွဲတော်ကာလအတွင်း မန္တလေး-မတ္တရာပြေးဆွဲနေ သော ရထားခရီးစဉ်၏ မန္တလေး- တောင်ပြုန်းလမ်းပိုင်းခရီးစဉ်ကို နေ့စဉ် အစုန်အဆန် ၁၃ခေါက် အထိ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား (တိုင်း-၃)မှ သိရသည်။
”တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကိုလည် ပတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် တွေက ရထားစီးပြီးသွားရတာကို နှစ်သက်သဘောကျကြသလို နယ် ဒေသတွေကနေလာတဲ့ ခရီးသည် တွေ အများစုကလည်း ပွဲခင်းထဲ ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်လို့ ရထားကို ပဲ အားကိုးစီးကြတဲ့အတွက်အ ခေါက်ရေကို တိုးချဲ့ပြေးဆွဲဖို့ စီစဉ် ရခြင်းဖြစ်တယ်။ လောလောဆယ် ခရီးစဉ်ရေးဆွဲထားတာကတော့ ခရီး သည်တွေအနေနဲ့ မန္တလေးဘူတာ ကြီးကနေစီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နံနက် ၅နာရီတစ်ခေါက်မှာပဲ စောင့် စီးလို့ရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အခေါက် တွေကို ၁၂လမ်း၊ မြောက်ပြင်သူရဲ ဈေးဘူတာကနေ စီးကြရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေများရင်များ သလိုပဲ တွဲဆိုင်းနဲ့ခေါက်ရေကိုတိုး ချဲ့ ပြေးဆွဲသွားဖို့စီစဉ်ထားရာမှာ တွဲဆိုင်း တိုးချဲ့ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ ရထား သံလမ်းအရည်အသွေး ကောင်းမွန် မှုရှိ၊ မရှိနဲ့ ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတုံး တွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးမှု တွေကို ပွဲတော်မတိုင်ခင်ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ”ဟု မြန်မာ့မီးရထား (တိုင်း-၃)မှ သွားလာရေးနှင့်ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင်၂၃ရက်တွင်ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် မန္တလေး- မတ္တရာခရီးစဉ်ပြေးဆွဲရာ၌ လိုက်ပါစီးနင်းသည့်ခရီးသည် အရေအတွက်မှာ နေ့စဉ် ၂ဝဝ ဝန်းကျင် သာရှိသော်လည်း တောင်ပြုန်းပွဲ တော်ကာလအတွင်း ခရီးသည် အရေအတွက်မှာ အနည်းဆုံး ၂ဝဝဝ မှ ၄ဝဝဝ ကျော်ခန့်အထိရှိကာ ရထားတွဲဆိုင်းနှစ်ဆိုင်းတွင် လူစီး တွဲရှစ်တွဲနှင့် ဘရိတ်တွဲနှစ်တွဲ စုစု ပေါင်း ၁ဝတွဲစီဖြင့် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲ ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မိုးရွာသွန်းမှု များပြားသောကြောင့် ဘီးလင်းနှင့် ဖာပွန်မြို့နယ်အကြားရှိ ဘင်ဘန်းတောင် ပြိုက?
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် မော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် သယ်ဆောင်လာသည့် ငွေကျပ် ၃၁၉၃သိန်းကျော်ဖိုး??
ငြိမ်းစုစီ ပြင်ဆင်ချက် ဖျက်သိမ်းရေး စတေကာကမ်ပိန်း ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်